ओलीलाई भट्टको प्रश्न, ‘८ महिनासम्म भेट्ने समय नदिने, तपाईंलाई स्वागत गर्नुपर्ने? – Karnalisandesh
ओलीलाई भट्टको प्रश्न, ‘८ महिनासम्म भेट्ने समय नदिने, तपाईंलाई स्वागत गर्नुपर्ने?
प्रकाशित मितिः २७ पुष २०७७, सोमबार ०९:३१ January 11, 2021
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत शुक्रवार सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेर त्यहाँका मुख्यमन्त्रीलाई गालि गरेर फर्किएका थिए।
आफ्नो समूहको प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको बृहत आमसभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका ओलीलाई धनगढी विमानस्थलमा स्वागत गर्न उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, मन्त्रीहरु, प्रदेश प्रमुखलगायत पुगेका थिए। तर, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भने गएका थिएनन्।
पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मुख्यमन्त्री भट्ट स्वागतमा नगएपछि उनमा राजनीति ‘संस्कार नभएको’ भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आमसभामै नवनियुक्त वनमन्त्री प्रेम आलेले कस्तो संस्कार नभएको मान्छेलाई मुख्यमन्त्री बनाइएछ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा ओली समूहका कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री भट्टको आलोचना गरिरहेका छन् भने प्रचण्ड-नेपाल समूहले भने भट्टको बचाउ गरिरहेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले भट्टले ठिक गरेको भनिरहेका छन्। नागरिक अगुवा र सञ्चारकर्मीसमेत मुख्यमन्त्रीको यो कदममा विभाजित भइरहेका बेला भट्टका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले समन्वय र औपचारिक जानकारी नहुँदा मुख्यमन्त्री भट्ट स्वागतमा नगएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्वपूर्ण कामका लागि भेट्न खोज्दा पछिल्लो ८ महिनासम्म समय नदिएको बताउँदै शिवसिंहले प्रदेशमा पार्टीको भेलामा आउँदा समन्वय र औपचारिक खबर पनि नगरिकनै स्वागतको आश गर्नु गलत भएको उल्लेख गरेका छन्। स्वकीय सचिवले मुख्यमन्त्रीले शिष्टाचार भेट नगर्दैमा संस्कार नभएको नहुने जवाफ दिएका छन्।
ुपहिले राजाको सवारी हुँदाको अञ्चलाधीशले गर्ने नमन अहिलेको गणतान्त्रिक ब्यबस्थामा कल्पना समेत गरिँदैन। किनकि यहाँ अहिले सामन्तवाद छैन। ८र८ महिनासम्म मुख्यमन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्त्वपूर्ण कामका लागि समय समेत नदिने अनि प्रदेशमा पार्टीको भेलामा आउँदा समन्वय र औपचारिक खबर पनि गर्नुनपर्ने। तर शिष्टाचार भेट गर्नुपर्ने। नगरे संस्कारहिन हुनुपर्ने। त्यसो नगर्दा प्रदेशसभा र सरकार विघटन गर्नुपर्ने। कस्तो तर्करु अनि कस्तो सनकरुु स्वकीय सचिव शिवसिंहले फेसबुकमा मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिएका छन्।
स्वागतमा नआउँदा प्रदेशसभा नै विघटन गरिदिने र मुख्यमन्त्री नै फेर्ने केन्द्रीय मन्त्रीहरुको धम्कीमा पनि स्वकीय सचिवले जवाफ दिएका छन्,भने ‘मुख्यमन्त्री व्यक्ति होइन, प्रदेशको सम्मानित संस्थाको साथै आस्थाको धरोहर पनि हो। त्यसैले मुख्यमन्त्रीले समग्र प्रदेशवासीको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीयता कसैको उपहारबाट प्राप्त वस्तु होईन। यो हजारौ शहीदको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि हो।’